Hordhac: Liverpool vs Chelsea – Klopp Vs Conte: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato Kulanka Reds & Blues Ee Saamaynta Wayn Ku Yeelan Kara Koobka Premier Leaque-ga. | Somaliland Tomorrow
January 31, 2017 - Written by eng Maxamed Cabdi
Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawaynaysa kooxda hogaaka Premier Leaque-ga haysa ee Chelsea, waxayna labada kooxood kulankan ciyaari doonaan iyaga oo 10 dhibcood ay Chelsea ka sarayso dhigeeda Reds. Kulankan ayaa saamayn wayn ku yeelan kara tartanka koobka horyaalka Premier Leaque-ga, waana kulan ay dhamaan kooxaha waa wayni si wayn u xiisaynayaan natiijada ka soo bixi doonta. Guul ay Chelsea gaadho ayaa keeni karta in rajada Liverpool ee koobka PL ay halkii ugu xumayd xili ciyaareedkan gaadho, halka guul ay Liverpool gaadho ay dib furi doono tartankan.
Tartanka: Premier Leaque-ga kulankiisa 23 aad
Natiijada Kulankii Hore: Chelsea 1-2 Liverpool
Liverpool ayaa kulankan Chelsea soo dhawaynaysa iyada oo ah kooxda uu culayska wayni saaran yahay waxayna kooxda Klopp soo guuldaraysatay saddexdii kulan ee ugu danbeeyay tartamada oo dhan ee ay Anfield ku soo ciyaartay iyada oo kooxaha Swansea City, Southampton iyo Wolves ay min saddexda dhibcood kala baxeen Anfield oo ayna Reds wax guuldaro ah ku arkin 17 kii kulan ee ka horeeyay. Tababare Antonio Conte ayaa sheegay in kulanka Anfield aanu noqon doonin kulan go’aanin doona in Chelsea ay qaadayso koobka ama in Liverpool ay tartanka ka hadhay.
Haddii ay Liverpool guuldaro kala kulanto Chelsea ayay Reds barbarayn doontaa rekoodh xun oo ay samaysay sanadkii 1923 kii markaas oo ay 4 kulan oo xidhiidh ah guuldaro kula kulantay garoonkeeda. Laakiin Klopp ayaa kalsooni ka muujiyay in kooxdiisu ay jawaab bixin doonto isaga oo xusay in ay wali qayb ka yihiin tartanka loogu jiro koobka PL.
Chelsea ayaa kulanka Anfield iskeenaysa iyada oo ku jirta xaalad aad uga duwan sidii ay ahayd kulankii ay Liverpool guuldarada kagala kulantay Stamford Bridge, wuxuuna Antonio Conte doonayaa in uu markiisa ka aarsado Klopp iyo wiilashiisa Reds oo uu kulankii Stamfrod Bridge waji gabax kala kulmay.
Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa go’aan xili danbe ah ka gaadhi doona haddii uu shaxdiisa ku soo bilaabi doono Sadio Mane iyo haddii uu kursiga kaydka dhigin doono kadib markii uu xidiga ree Senegal ka soo laabtay tartanka qaramada Afrika oo uu uga qayb galay xulka qarankiisa Senegal. Sadio Mane ayaa isniintii soo gaadhay Liverpool wuxuuna seegay tababarkii kooxdiisa, taas oo la micno ah in uu fursad u haysto hal tababar oo saacado ka horeeya kulanka Chelsea.
Tababare Klopp ayaa shirkiisii jaraa’id ee ka horeeyay kulanka Chelsea ku xaqiijiyay in difaaca midig ee Nathaniel Clyne uu wali ka maqan yahay tababarka kooxdiisa waxaana haysata dhibaato feedhaha ah laakiin waxaa kulanka Chelsea diyaar u ah Adam Lallana oo aan safan kulankii FA Cupka ee Wolves. Da’yarka Ovie Ejaria ayuu dhaawac canqawga ahi soo gaadhay wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaan muddo aan la shaacin.
LIISKA LIVERPOOL EE KULANKA CHELSEA: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Milner, Henderson, Wijnaldum, Lallana, Firmino, Origi, Coutinho, Karius, Klavan, Gomez, Moreno, Emre Can, Lucas, Stewart, Sturridge, Mane, Woodburn, Wilson.
Dhinaca Chelsea ma jiro wax walwal ah oo uu Antonio Conte ka qabo dhaawacyo ama ganaaxyo wuxuuna haystaa koox uu ka soo xulan karo shaxdiisa ugu fiican. Macalinka ree Talyaani ayaa dib ugu yeedhan doona ciyaartoyda kooxdiisa ugu muhiimsan oo uu nasiyay kulankii FA Cupka ee Brentford. Conte ayaa kulankii FA Cupka shaxdiisa ku sameeyay sagaal isbadal, wuxuuna kulanka Liverpool haystaa xidigo u nastay kulankan muhiimka ah.
Goolhaye Asmir Begovic iyo Branislav Ivanovic ayay suurtogal tahay in liiska Chelsea laga saaro waxayna u dhaw yihiin in maalinta suuqa ugu danbaysa ka baxaan Chelsea. Heshiiska uu Branislav Ivanovic ugu biirayo Zenit ayaa ugu dhawaan dhamaystiran halka bixitaanka Begovic uu ku xidhan yahay haddii ay Blues suuqa ka hesho badalkiisa. Laakiin waqtigan aan qoraalka wadno Begovic iyo Ivanovic waxay ku jiraan liiska Chelsea.
Conte ayaa shaxdiisa kulanka Anfield dib ugu yeedhan doona xidigo ay ka mid yihiin Eden Hazard, Diego Costa, Matic iyo Courtios. Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ka mid ah kooxaha rekoodhka ugu fiican ku haysta dhaawacyada ciyaartoydooda wuxuuna Conte nasiib u yeeshay in xidigaha ugu muhiimsan kooxdiisu ay taam u ahaadaan.
LIISKA CHELSEA EE KULANKA LIVERPOOL: Courtois, Begovic, Ivanovic, Alonso, Fabregas, Zouma, Kante, Hazard, Loftus-Cheek, Moses, Pedro, Costa, Matic, Willian, Batshuayi, Cahill, Terry, Azpilicueta, Chalobah, Luiz, Eduardo, Aina, Ake.
XOG AAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KULANKAN KA OGAATO:
Kulanka Anfield ayaa noqon doona kulankii 70 aad ee ay kooxaha Liverpool iyo Chelsea iskaga horyimaadeen horyaalka Ingiriiska intii loo bixiyay Premier Leaque-ga. Liverpool ayaa doonaysa in ay Chelsea marti iyo minanba ku garaacdo markii ugu horaysay tan iyo xili ciyaareedkii 2011-12 markaas oo Blues ka tirsatay lixda dhibcood ee labada garoon.
Laakiin Chelsea ayaa iyaduna isha ku haysa in ay Liverpool ka soo gaadho guusheedii 50 aad ee horyaalka Ingiriiska, waxayna Liverpool noqon kartaa kooxdii sagaalaad ee ay Chelsea taariikhdeeda ka gaadhay 50 guulood oo horyaalka heerka kowaad ee Ingiriiska ah.
Chelsea ayaan wax guuldaro ah ku soo arkin Anfiedl afartii kulan ee ugu danbeeyay ee horyaalka premier Leaque-ga waxayna ka soo heleen laba guulood iyo laba babraro ah.Guuldaradii ugu danbaysay ee Chelsea ku soo gaadhay Anfield ayaa ahayd May 2012 kii.
Tababare Antonio Conte ayaa Chelsea soo maamulay 22 kulan oo Premier Leaque-ga ah, wuxuuna ka soo helay 55 dhibcood waana rekoodh uu la wadaago Jose Mourinho oo isna 22 kiisii kulan ee ugu horeeyay Premier leaque-ga ka helay 55 dhibcood laakiin Jurgen Klopp in uu 55 dhibcood helaa waxay ku qaadatay 34 kulan.
Tababare Jurgen Klopp ayaa kaliya hal guuldaro kala kulmay lixda kooxood ee waa wayn ee Premier leaque-ga 14 kii kulan ee uu ka horyimid kooxaha Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo Arsenal. Klopp ayaa lix jeer kooxahan ka soo guulaystay wuxuuna la soo kulmay 7 kulan oo barbaro ah laakiin Klopp ayaa xili ciyaareedkan ah tababaraha kaliya ee aan wax guuldaro ah kala kulmin lixda kooxood ee ugu sareeya PL.
Liverpool ayaa hal dhibic oo kaliya ka soo heshay saddexdii kulan ee Premier Leaque-ga ay soo ciyaartay iyada oo uu Sadio Mane ka maqan yahay iyada oo laba kulan guuldaraysatay isla markaana hal kulan barbaro gashay, wax guul ahna may gaadhin kulan PL ah oo uu Mane ka maqan yahay.
Liverpool (4-3-3): Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan, Milner, Henderson, Can, Firmino, Coutinho, Lallana, Mane
Chelsea (3-4-3) : Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matic, Kante, Alonso, Hazard, Pedro, Costa